बाहुनलाई नढोगेको सजाय देश निकाला !
Created on Monday, 12 October 2020 08:40
रनु पुलामी मगर
लेखक डा. राइटसले सडकमा छरपष्ट छरिएका बौद्ध पुस्तकहरूलाइ बोकेर बिदेश लगि क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयमा सुरक्षित राख्न लगाएका थिए । नेपाली शासकहरू त्यस्ता ऐतिहासिक ग्रन्थहरूलाइ जतन होइन खतम गर्न तिर लागे । बौद्ध धर्मलाइ निमिट्यान्न पार्ने कार्य गरे ।
प्रधानमन्त्री भिम शम्शेरले हिन्दू ब्राहमणहरूलाइ ढोग नगरेकै कारण अपराध देखाइ भिक्षु कार्यकर्ताहरूलाइ गाली बेइज्जती अपमान गर्दै देश निकाला समेत गरे । भिक्षु महाप्रज्ञा र अमृतानन्दज्यूलाइ मात्र होइन अन्य आठ बौध भिक्षुहरूलाइ समेत बौध धर्म प्रचार प्रसार गरेवापत देश निकाला गर्ने काम गरियो । बुद्ध धर्म प्रति आस्था विश्वास राख्ने र यसको प्रचार प्रसार गर्ने जो कोहिलाइ हिन्दू शासकहरूले निमिट्यान्न पार्ने काम गरे । यस्तो भयावह अवस्थामा बौद्ध धर्मको प्रचार प्रसार गर्नु र बौद्ध बिहार, गुम्बा निर्माणको कुनै सम्भावना रहेन।
देशनिकाला गरिएका भिक्षुहरु:
स्मरणिय छ, जीवनको पछिल्लो ससमय तिर हिन्दूबर्णाश्रम व्यवस्था जातीबादका बिरोधी, बुद्ध धर्मबाट प्रभाबित र दिक्षित दलित मूलका महान भारतीय नेता तथा संबिधान निर्माता डा भिमराव अम्बेदकरले सन् १९५६ मा हिन्दू धर्म त्यागेर आफना १० लाख अनुयायीका साथ बुद्ध धर्म प्रबेश गरे । जातीबादको पृष्ठपोषक हिन्दू धर्म शास्त्र मनुस्मृतिलाइ खुलेआम जलाइ दिए । त्यस यता भारतमा बुद्ध धर्मको उकाली शुरू भयो । तर नेपाल सत्तामा भने सधै हिन्दू नेताहरू मात्रै आसिन रहे जसले हिन्दू राष्ट्र नेपाललाइ मलजल गरिरहे ।
साभार:नेपाल मगर बौद्ध सेवा समाजद्धारा प्रकासित लेखक टीबी पुन मगरको आदिवासी मगर र बौद्ध धर्म'